မလေးရှား မူဆလင် အစိုးရရဲ. ဗုဒ္ဒ ဘာသာအပေါ ထား ရှိသော စိတ် ထား Movie လေးပါ .... | LAMINTAYAR
စကာင်္ပူသံရုံးမှ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု. မှတ်တမ်း မေ ( ၁...
မလေးရှား မူဆလင် အစိုးရရဲ. ဗုဒ္ဒ ဘာသာအပေါ ထား ရှိသော...
ထက်လူနှင်. အတွေး သံသရာ...အပိုင်း ( ၁ )
You re Special to Me
The smallest woman in the world. Age- 22 years
မလေးရှား မူဆလင် အစိုးရရဲ. ဗုဒ္ဒ ဘာသာအပေါ ထား ရှိသော စိတ် ထား Movie လေးပါ ....
Posted by lamintayar at 9:11 AM Labels: သတင်း video......
ချမ်းအောင် April 30, 2010 at 6:49 AM
စိတ်ပျက်နားငြီးစရာ သီချင်းတွေက စာဖတ်ချင်းကို တော်တော်ကြီးနှောက်ရှက်လို့ ပြန်သွားပါပြီ။
♥ကိုဇော်♥ April 30, 2010 at 10:12 AM
အရင်က မလေးရှား ၊ အင်ဒိုနီးရှား ဆိုတာတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတွေပါ။
နောက်မှ ကုန်သည်တွေနဲ့ အတူ ပါလာတဲ့ ဘာသာက အတင်းအကြပ် လွမ်းမိုးရင်း မူစလင် ဘာသာကို အတင်းအကြပ်အပြောင်းခံရတာ။
အဲဒီတုန်းက အသိဥာဏ်လည်း နည်းခဲ့ကြတာကိုး။
နောက်တော့. . . အဲဒီ ဘာသာကနေ ထွက်ရင် အသက်ရှင်လျက် ထွက်လို့ မရဘူး ဆိုတော့ လူတွေလည်း ကြောက်ပြီး မြဲကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ စည်းကမ်း သူတို့ မလိုက်နိုင်ပါဘူး။ အခု ဒီဗီဒီယို ဖိုင်က ဘယ်နေရာမှာလဲ ဆိုတော့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ နီးတဲ့ နေရာ တစ်ခုမှာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အရင်က မဟာသီ ရဲ့ လက်ထောက်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူက မဟာသီရဲ့ အမြင်နဲ့ ဆန့်ကျင့်ဘက် ဖြစ်တယ်။ သူ့နာမည်က “ အာဒဝီ ” လို့ခေါ်တယ်။ “ ဘာဒါဝီ ” မဟုတ်ပါ။ တစ်နေ့ မဟာသီ တွေ့ဆုံပွဲ တစ်ခု အတွက် နိုင်ငံခြား ထွက်နေတုန်း သူက မဟာသီကို ထောက်ခံတဲ့ သူတွေ အားလုံးကို ဖမ်းပြီး ထောင်ထဲ ထည့်တယ်။ အဲဒီ လူနေရာမှာ သူ့လူတွေကို ထည့်တယ်။ သူရဲ့ အဖြစ်စေချင်ဆုံးက ဘာလဲ ဆိုတော့ “ ဒီနိုင်ငံမှာ မူစလင်ကိုသာ ကိုးကွယ်တဲ့ မလေး နိုင်ငံသားပဲ ရှိရမယ်။ ” ဆိုတဲ့ စိတ်အစွဲကြောင့် မလေး - တရုတ် အဓိကရုံးတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ရသလို တရုတ်တွေလည်း တော်တော် သေခဲ့ရတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေကို ဖျက်ခဲ့တာပါ။ တော်တော်လည်း ပွက်လောရိုက်ပြီး မတည်ငြိမ်ခဲ့တဲ့ ခေတ်ကာလလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။
ဒီသတင်းကို ကြားလို့ မဟာသီ ပြန်လာပြီး သူ့လူ လူယုံတွေနဲ့ အာဒဝီ ကို ဖမ်းပြီး အကျဉ်းချထားတာ အခု ထိပါပဲ။ မဟာသီရဲ့ အယူအဆက မလေးတွေနဲ့ချည်းဆိုရင် ဒီနိုင်ငံက မတိုးတတ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် တိုးတတ်မှုကို ရှေးရှုပြီး တရုတ်တွေကို စီးပွားရေး လုပ်ခိုင်းပြီး သူ့မလေးတွေကို အကာအကွယ် ပေးထားတာပါပဲ။ သူ့ရဲ့ လမ်းစဉ်ဟာ မှန်တယ် ဆိုတာကို တိုင်းပြည် တိုးတတ်တာနဲ့ ကြည့်ရင် မြင်သာပါတယ်။
နောက်ဆုံး တစ်ခု ပြောချင်တာကတော့ မဟာသီရဲ့ မျိုးရိုးဟာ မလေးနိုင်ငံသား အစစ် မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အဖေဟာ ဆင်းရဲ လွန်းလို့ မလေးရှား နိုင်ငံကို ရောက်လာတဲ့ “ အိန္ဒိယ လူမျိုး ” ဟိန္ဒူ ဘာသာ သာ ဖြစ်တယ်။ နောက်မှ မလေးမ နဲ့ ယူပြီး နိုင်ငံသား ခံယူခဲ့တာပါ။
ဒါတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော် သိသမျှ ဖော်ပြတာပဲ ဖြစ်တယ်။ အကျယ် သိချင်ရင်တော့ မလေးရှား အမျိုးသား ပြတိုက်မှာ သွားပြီး ကြည့်လို့ရပါတယ်။
( အခု ဘုရားဖြို တဲ့ နေရာကိုတော့ ဒါလေးပဲ ပြထားလို့ ကျနော် သေချာ မသိပါ။ )
Maungmaung Kachin March 24, 2013 at 4:49 AM
အော်မင်းတို့ က ဒီလိုလား မင်းကွယ်ရာဘာသာ ကဘယ်လိုလဲလို့ ပြန်မေးပါရစေဗျာ။
ကိုယ်ယုံ ကြည်ရာကို ကွယ်ကိုးတာကိုမင်းတို့ ဘုရားက. ဘာတွေဟောခဲ့ တာလဲ.